Yiziphi isixha lomshado roses
Umlando lomshado sezimbali liyinkimbinkimbi futhi enezici. Futhi udideke njengoba noma iyiphi indaba, echazwa komunye umuntu. Futhi njengoba enhle njengoba inganekwane ukuthi abantu beveza, futhi njengoba inganekwane, ukuthinta futhi ngingakazi lutho.
Kunengqondo - nje nesisekeli, kodwa kungakanani kungenxa yakhe. Lonke ukubonakala intombazane, ukulungiselela ukusho kwabo "yebo" Indoda thanda bani silungele ukwabelana iphakade - uhlale ithuba izinyembezi wokwenama nokujabula. Futhi inhliziyo lokhu kufinyelelwa hhayi kuphela solemnity okwamanje, kodwa labo imininingwane, ngaphandle kwalokho akunakwenzeka namuhla lomshado ukugubha. Enye yalezi izingxenye - izimbali likamakoti. Isiko isikhathi sethu - isixha lomshado roses. Kodwa lapho wenza silandela umkhuba lo?
Long njengoba eseshadile zokuhlobisa ngokwakho umqhele omuhle izimbali. Ngezinye izikhathi esasikudinga sasikuthola ngempela umqhele (the sikakhokho lokhu umqhele likamakoti njengengxenye kwesihenqo, balenza cap, kuze kudabuke umhlane, kuye ngokuthi izidingo fashion), ngezinye izikhathi izimbali kuxhumene izinwele zakhe.
Yayisekelwe Kuyinkolelo-ze, lapho uvele ezandleni wonke omakoti lomshado isixha rose, inomlando omude. Kukholakala ukuthi zivela e-English imfashini XVII-XVIII eminyaka. Ngokokuqala ngqá wedding izingubo abangu ehlotshiswe izimbali, orange izihlahla - imbali orange. Futhi lokhu fashion kunalokho ngokushesha yatha- e-Europe, naphezu kweqiniso lokuthi izimbali orange zazibiza kakhulu. Kungani ungenzi ngenxa izinsuku abajabule empilweni yami!
Expensiveness futhi inaccessibility ngoba imbali orange kwaholela amantombazane labavela emindenini lephuyile, uhamba phansi indawo yezinto, waqala ukuba bazihlobise nabanye, imibala ngaphezulu elula. Iyatholakala zazivame izimbali zasendle (engadini kuwufanele engenawo umbala owolintshi kancane, futhi umshado sezimbali roses kungaba into fantastically ezibizayo), kodwa kunzima ukunamathisela dress - umoba ulula kakhulu. Kwakukhona lokuqala sezimbali bakamakoti, owakhulela kube sosukwini lwethu ku esisemqoka futhi cishe celebration ebaluleke kakhulu-accessory - lomshado sezimbali roses. umakoti Modern kakade angakwazi ukukhokhela okuningi kuka daisy futhi cornflowers, kodwa noma kunjalo, isibonelo, eNgilandi namanje pansies bese ukhohlwa ozongitshela ingabe imibala yalezi zinto ezisemqoka kuhlobisa lomshado, futhi a sprig of umbomvana ngempela kuxhumene isixha umakoti ka lunegazi lasebukhosini. Ngakho, ukusho okuthile emhlabeni isixha yami, akudingekile ukuba kube ngobuhlanya ezibizayo. Futhi ngithi, ngempela, kungaba eningi. Futhi sekuyisikhathi eside abantu wenza ulimi ke!
Ukuze isixha yakho Bridal rose, isithombe okuyinto uzonikhumbuza injabulo yakho zokuphila kwakho ndawonye, kwaqala 'ukukhuluma', kubalulekile ukwazi ulimi. Yilokho umbala:
Red is ukuba umbala uthando, impilo kanye nogqozi ezaziwayo. Ngezinye izikhathi lihlotshaniswa igazi revenge, khumbula, isibonelo, ukuthi uhlobo lwembali enephunga elimnandi ebomvu - iwuphawu Okthoba Revolution-1917 ngonyaka. Ngakho qaphela ne abomvu. Nakuba isixha umshado red roses, akungabazeki, uzokutshela mayelana ubumsulwa nezifiso zakho.
White is ukuba lwenhlanzeko nobumsulwa ezaziwayo. Uma uqiniseka nezinye izimbali ezimhlophe - lawa izimbali yakho.
Black umbala - uphawu nokulila usizi. Hhayi umbala lomshado, yebo.
Yellow - wonke umuntu uyazi sibonga ingoma ethandwa, ukuthi lokhu umbala - uphawu zokuhlukana. Ancient uphawu yayo - inzondo, inzondo. Qaphela izimbali ophuzi sezimbali lomshado.
Green - uphawu sokuba nokholo nethemba.
Blue - kusho obukhethekile onkulunkulu. Ungaqiniseki ukuthi ungakwazi ufanelekele ubuhlobo obunjalo? Noma ungazi ngalokho onkulunkulu ukuthini? Cabanga ukuthi udinga imbali blue sezimbali.
Kodwa blue kuyadingeka ngempela ke - uphawu ukuthembeka.
izintokazi Grand sikhombisa umbala onsomi - uphawu ngobukhulu.
Yiqiniso, konke lokhu nje izinhlamvu. Yayisekelwe Kuyinkolelo-ze, intela i - hhayi umnikelo saziso kuya ngekusasa lesintu elijabulisayo. Landela noma cha - lesi yisinqumo sakho siqu. Ekugcineni, lomshado bakamakoti unelungelo ukuba umane enhle, ngaphandle Amacebo futhi emagama.
Lokho ukunikeza indoda engu-55 ubudala? Sifunda!
US ngamaholide: bayini?
Usuku UWelder. Yini ukunikeza mkhakha?
Awazi kanjani ukubungaza ingane emvelweni? Lezi imibono kuzosiza
Iron nokunamathisela ngomthofu polypropylene amapayipi: ukubuyekeza ezinhlobo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Yini esitolo imali: amathiphu namasu
Isimo Federal - Iyini?
Ihhotela Holiday Park (Bulgaria): abahambi Izibuyekezo
Uwoyela Engine: kophawu, incazelo, ngezigaba. Yini izimpawu uwoyela motor?
Zonke iminyuziyamu waseRoma nezithombe
Ikamu Summer - imisebenzi Uhlelo nokuzijabulisa. Camp phakathi namaholidi asehlobo